Qaramada Midoobay oo kaalmo lacag ah u qorsheysay fatahaadaha Soomaaliya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Qaramada Midoobay oo kaalmo lacag ah u qorsheysay fatahaadaha Soomaaliya.
Qaramada Midoobay oo kaalmo lacag ah u qorsheysay fatahaadaha Soomaaliya.
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska isku dubaridka gargaarka bani aadanimada Qaramada Midoobe ee Soomaaliya UNOCHA ayaa lagu sheegay in Sanduuqa gargaarka bani aadanimada Qaramada Midoobe ee Soomaaliya uu heley US$9.26 million lagu caawin doono ku dhowaad 300,000 oo kamid ah dadka ay saameeyeen fatahaadaha Soomaaliya.
“Deeqda ka timid Sanduuqa Qaramada Midoobe waxay hey’adaha gargaarka awood u siin doontaa in ay kordhiyaan barnaamijyada naf-badbaadinta ah gaar ahaan dadka sida daran u saameysay fatahaadaha ka dhacay dalka,” sidaas waxaa yiri Mr. Adam Abdelmoula, oo ah isu duwaha gargaarka bani aadanimada Soomaaliya.
Sanduuqa gargaarka bani aadanimada Qaramada Midoobe ee Soomaaliya ayaa $40.2 million ka heley dalalka; Australia, Canada, Denmark, Germany, Ireland, Kuuriyada LKoofureed, uxembourg, Netherlands, Norway, Sweden iyo Switzerland.
Qoraalka ka soo baxay xafiiska isku dubaridka gargaarka Qaramada Midoobe ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilli roobaadka deyrta oo ka bilowday gobolada dalka qaarkood sida degaanada Puntland iyo gobolada Hiiraan, Bakool iyo Galgaduud.
Previous articleFAO oo ka digtay Ayax mar kale ku soo fool leh Soomaaliya.
Next articleBeesha Caalamka oo ka hadashay arrimaha doorashooyinka, amniga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.